Zeevou | PMS Award-Award, Onye njikwa Channel & Injin ntinye akwụkwọ
Njikọ Ndenye Akaụntụ nke Google
Ndi ana-akpo Google
Onye mmeri PMS & Channel Manager
Zeevou bụ Sistemụ Njikwa Ngwongwo na Onye njikwa Channel nke na-ewepụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mpaghara niile nke obere oge mgbazinye gị, na-ebuli usoro, ma belata njehie mmadụ.
Atụmatụ ndị ga-agbanwe azụmaahịa gị ozugbo
Ọnọdụ PMS dị iche iche nke Zeevou na-enye gị ohere ijikwa akụ gị niile site n'otu nbanye etiti.
Gbaa mbọ hụ na ntinye akwụkwọ ọ bụla na-akọrọ igbe niile, n'agbanyeghị ebe ha si.
Jikwaa nyocha gị niile - keysafes, mkpọchi amamịghe, ma ọ bụ KeyNest - site na Zeevou.
Mbuli gị kpọmkwem ntinye akwụkwọ na anyị SEO-enyi na enyi na ebe nrụọrụ weebụ ike na n'elu analytic ngwaọrụ.
Pụgharịa ọnụego gị na nnweta gị ozugbo iji nweta ọwa karịrị 200 site na iji njikọ API anyị nwere ụzọ abụọ dị ike.
Usoro ịkwụ ụgwọ nke Zeevou na-enye gị ohere ịchịkwa ịkwụ ụgwọ gị, si otú a na-emeziwanye ego gị.
Mee ka ndị na-elekọta ụlọ gị nweta ozi oge niile mgbe ha na-aga ma nyere aka jikwaa mgbazinye gị.
Nwee ezigbo ngosipụta nke azụmaahịa azụmaahịa gị n'oge ọ bụla - ọ bụrụ ego, obibi ma ọ bụ arụmọrụ.
Jikwaa nkwukọrịta niile (ozi ịntanetị na SMSes) maka ndị ọbịa na ndị ọrụ si n’otu ebe etiti ma lelee ihe niile.
Nweta ụlọ nrụgharị CRM na-agbanwe agbanwe nke na-akpaghị aka na adreesị ozi-e na-ewulite nchekwa data GDPR na-ebulighị mkpịsị aka.
Mee ka njikwa nhicha gị rụọ ọrụ - ya na ndị ọrụ ụlọ ma ọ bụ site na nkwekọrịta ya na ụlọ ọrụ nhicha na-ezigara.
Zeevou na-enye ndị na-etinye ego na ndị nwe ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka mgbazinye ezumike na-elele ụgwọ ha na oge.
Zeevou na-enye gị ohere idobe nsogbu niile nke nsogbu ma lelee ọganihu ha site na A ruo Z.
Anyị na-enye gị Nkwado nkwado maka na anyị maara nke ọma na ọganiihu anyị dabere na nke gị.
Zeevou na - enyere gị aka ịgbakọ uru ị bara uru maka onwe gị na ndị nwe ụlọ ị na - ejikwa.
Nye Zeevou ọhụụ ọhụụ ma lelee azụmahịa gị ka ọ na-eto site n'ike ruo n'ike!
Jikwaa arụmọrụ gị niile na etiti, ma rụọ ọrụ dị ukwuu nke ọrụ nchịkwa ụbọchị gị.
Zeevou na-enye gị ohere ịtọ ọnụego n'ọtụtụ maka ọtụtụ njirimara ma ọ bụ kwalite ọnụ ahịa site na iji ngwa ọnụahịa siri ike.
Jiri atụmatụ a pụrụ iche iji jikwaa mgbazinye abalị, kwa izu, na kwa ọnwa site na nbanye nke etiti.
A na-ewepụta ọhụụ ọhụụ kwa ọnwa, ebe anyị na-achọ ibute ụzọ n'ịkpụzi ụlọ ọrụ ahụ.
ỌT .T. MARA
Machiini gị usoro
ma nọdụ ala
Zeevou jikọtara ya na ndị mmekọ dịgasị iche iche iji nyere gị aka ịme ka akụkụ ọ bụla nke azụmaahịa ile ọbịa gị site na ịnye ọnụahịa, gaa na nyocha ndị ọbịa, na nkwukọrịta na ịza ajụjụ.
Gịnị Mere Anyị Ji Dị Iche?
Ndị otu anyị na Zeevou ewepụtala ọtụtụ atụmatụ pụrụ iche, dabere na nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ anyị na-enyere ngwaahịa ahụ aka iru ndụ achọrọ n'ezie. Anyị kwenyere na ihe ọhụrụ, arụmọrụ, na uto. Anyị na - etolite, na - agbanwe ma na - eme ihe n’ụzọ pụrụ iche. Iji chọpụta ihe dị iche na asọmpi, pịa bọtịnụ dị n'okpuru.
Hụ Onwe Gị
Iruo Iru Gị
site na Ijikọ 200+ Channels
Mejupụta abalị efu gị site na ịdepụta mgbazinye gị n'ọtụtụ ọwa dị ka o kwere mee ma na-ezere ịkwụ ụgwọ. Kesaa ọnụego gị na nnweta ya site na ịpị aka ole na ole na ntanetịime anyị karịrị 200 site na ikike Zeevou dị ike, ezigbo oge, ikike njikọ 2 API.
Akpaaka bụ ihe anyị kacha mma! Malite na itinye ngwongwo gị na Zeevou, tọọ ọnụego gị, nnweta, ma mechie ọwa ahụ. Zọpụta oge nchịkwa ma tinye ya na uto. Wee nọdụ ala, zuru ike, ma nwee ọ !ụ!
Njikere itolite ma bulie azụmahịa gi? Hapụ Zeevou na-arụ ọrụ na usoro gị. Just na-elekwasị anya na ịbawanye uru gị. Ka anyị meere gị ihe siri ike. Ihe dị mfe!
Zeevou abụghị naanị PMS na njikwa faili. Anyị na-achọ ịbelata ịdabere na OTAs. Ka anyi sonyere ndi agha, ghapu ulo oru ma ghuta Ntughari Ntughari Ntughari! Ohere di otua!
Jikọọ na Platform Ndenye Akwụkwọ Na-enyefeghị Aka
Depụta akụ gị na Zeevou Direct ma lelee ego kwesịrị ekwesị site na ndenye aha na-asọba n'ime akpa gị. You maara na ọtụtụ ntinye akwụkwọ ntinye akwụkwọ na-akwụ ụgwọ 15-25% na ụgwọ? Na Zeevou Direct, ndị ọbịa na ndị ọbịa na-enweta azụmahịa ka mma n'ihi na ọ nweghị ndị ọzọ na-edebe ihe ha mere. Na mgbakwunye, enweghị onye ọbịa na ozi kọntaktị ọbịa na-egbochi, yabụ ị ga-enwe nkwukọrịta ozugbo. Debanye aha n'efu ugbu a ma nyere anyị aka ịghọta Ntughari Ntughari Ntugharị! Enweghị ihe jikọrọ!
Ihe nchịkọta ego maka ego maka mkpa niile
Enweghị ọrụ, enweghị ndị etiti, enweghị ụgwọ zoro ezo!
Ohere ndị Patrons nwere agaghị agwụ agwụ. Kpughee ike Zeevou site na ịdenye aha kwa ọnwa ma ọ bụ kwa afọ ma hapụ anyị ndị ọzọ. Nwetao ihe niile PMS Zeevou, onye njikwa ọwa na igwe ntinye akwụkwọ ga-enye. Nwee ohere a na-akparaghị ókè ma zuru ike.
Onye nkwusa ozioma
Nweta SEO-enyi na enyi, websaịtị ngwa ngwa wee depụta mgbazinye gị na ikpo okwu ntinye akwụkwọ na ọrụ anyị, Zeevou Direct. Machiini nhazi gị kpọmkwem ntinye akwụkwọ. Jikọọ ndị agha taa ma nyere netwọkụ nke ndị ọrụ mmekọ aka ịgbasawanye iru anyị!
Okwu nye ndi n’enyemaka ndi mmadu
Ọ bụrụ na ị nwere nkeji ole ị nwere, obere ihe ị ga-akwụ maka otu ọ bụla.
Onye Nkwusa Ozi Ọma ma ọ bụ Onye Nlekọta?
Ihe Ndị Nlekọta Ndị Ibe Anyị na-ekwu Banyere Anyị
Na mbu, echere m na ọrụ na enyemaka ị na-enweta site na Zeevou dị oke mma. Oge ịbanye, kpọtụrụ WhatsApp na onye na-enye gị ọzụzụ, onye ozi Facebook yana nkata n'ịntanetị na saịtị Zeevou. Nweghị ike ịrịọ maka ọtụtụ ihe. Dị ka ihe ọ bụla ọzọ, ọ na - ewe oge ole na ole iji mee ihe ruo mgbe ị jiri ya ma ana m achọta ugbu a, enwere m ike ịnyagharịa Zeevou na-enweghị mkpa enyemaka isiokwu na Ajụjụ nke bụkwa ngwaọrụ dị ịtụnanya iji mee ihe ịchọrọ ịchọrọ ịnwale ihe na gị nwee ma kuziere onwe gi. O nwere ihe niile ịchọrọ site na koodu isi, usoro nhicha, ozi ịntanetị akpaaka na ọtụtụ ihe ndị ọzọ na enwere m obi anụrị na achọtala m Zeevou ma mee nyocha m tupu mụ na onye ọzọ aga.
Cara Watson-ichu nta
Akụkọ Mgbe Ochie Arụ Ulo LTD
Anyị ejirila Zeevou mee izu ole na ole, uru ga-abara m bụ ọrụ a. Inwe ike ide akwụkwọ ngosipụta oge zuru oke bụ mmalite dị ukwuu na njem m nke Zeevou, nke oge ezumike 1.5-oge na-esote ma enwere m ike izipu kọntaktị m na Zeevou mgbe ọ bụla masịrị m. Bụ onye ọhụụ na ụlọ ọrụ na-ahụ maka ebe obibi dị egwu ma Zeevou abụghị usoro dị mfe iji chọpụta, mana ọhụụ ụlọ ọrụ ogologo oge yana ọrụ ndị ahịa pụtara na amaara m na m na-enweta ego m!
Ngwọta Ngwongwo Green Wall
Enwere m ike ikwu n’eziokwu na Zeevou agbanweela ndụ m! Ebe ọ bụ na m gafeela ndị njikwa ọwa 5 na azụmaahịa ụlọ m Serviced Ugbu a, achọtala m oge dabara adaba maka azụmaahịa anyị. Dị nnọọ mfe, Zeevou na-eme ka ihe dị oke mfe! Ọ dị ngwa, ọ dị mfe iji. Kemgbe m sonyeere Zeevou enweela m oge ọzọ m ga-elekwasị anya na azụmaahịa m karịa ịnọ na ya! Dịka azụmahịa SA, anyị na-akwado akwụkwọ mkpọsa mkpọsa zuru ezu. Zeevou enyere gị aka ime nke a. Nkwado dịnụ dị ịtụnanya, ọ bụrụ na m jụọ ajụjụ na otu ndị ọrụ Facebook, m nwere azịza na nkeji. Zeevou bụ onyinye n'ezie maka onye na-eweta Ulo Ọrụ Nlekọta Ọrụ. Daalụ!
Companylọ ọrụ Ollivers
Amalitere m na nkeji nkeji mana achọrọ m ịga ihe dị ka a ga - asị na m nwere 100 iji hụ na m nwere ike ịba ụba ngwa ngwa na nke ọma. Zeevou agbaghara ọfụma maka ịnye ọwa njikwa ma mee ka ntụgharị ntụgharị dị nnọọ mfe, ekele ha bụ na anyị nwetara akwụkwọ ntinye 10K site na ịnọ abalị 3 site na Airbnb. Ọganihu na ndozi bụ mgbe niile ma ha na-nzaghachi nke ọma ma mejuputa mgbanwe ndị m tụrụ aro nke bụ fab ịhụ. Ọbụna nwoke ahụ bụ onyeisi anaghị m achọ ile anya mgbe m rapaara. Ọ bụ nnukwu mpempe akwụkwọ ga-adị ịtụnanya na otu afọ ma ọ bụ abụọ. Jikọọ na mgbanwe…
Nkasi obi nke Classy
Zeevou enyeworo Cliftonvalley Apartments aka site na 3 gaa na 15 nkeji. Zeevou bụ nnukwu ngwa ọrụ na - enye anyị ohere ijikwa ntinye akwụkwọ anyị, ndị ọbịa, ndị na - etinye ego na ego. Ihe jikọrọ ya na Signable, Xero na Stripe bara ezigbo uru ma belata ọrụ anyị, na-enye anyị ohere ilekwasị anya n'akụkụ ndị ọzọ nke azụmahịa ahụ. Zeevou na-aga n’ihu na-eme nke ọma n’oge na-adịghị anya ọ na-aghọkwa ụlọ ahịa otu-nkwụsị zuru oke maka akụkụ niile nke azụmahịa anyị na-eje ozi. Zeevou nwere mmasị ige ntị ma megharịa ngwaahịa ahụ ka ọ dabara maka mkpa ndị ọrụ ya. Anyị na-atụ anya ịnwale atụmatụ ọhụrụ ugbu a na ụzọ map zuru ezu.
Fọdụ n'ime Ihe Ndị Anyị Ruru
"Ọ bụ ezie na ụwa jupụtara na nhụjuanya, ọ jupụtakwara na imeri ya." Helen Keller
Twitter Facebook LinkedIn Whatsapp Instagram Pinterest Nsogbu
Zeevou meriri VRMB's Keystone Awards 2021